सेयरमा लगानी गरेर कति कमाउनु भयाे ? पूराना सेयर खेलाडी शिवप्रसाद पाैडेलसँग कुराकानी - Arthasansar
आइतबार, २६ पुस २०७७, १० : २४ मा प्रकाशित
शिवप्रसाद पाैडेल सेयर बजारका पूराना खेलाडी हुन् । राष्ट बैंकमा कार्यरत आफ्नै दाजुकाे सल्लाहमा सेयर बजारमा प्रवेश गरेका पाैडेल सेयर बजारमा पूरा समय सपर्पित छन् ।
पाैडेल २०४८ सालमा उनी बैंकहरूकाे आइपिओ किनेर सेयर बजार प्रवेश गरेका थिए । उनी केही समय बैदेशिक राेजगारमा गएका थिए । फर्केपछि उनी निरंतर सेयर किनबेचमा लागिरहेका छन् ।
उनी कस्ता कम्पनी छनाैट गर्छन् ? कम्पनीले दिएकाे लाभांशकाे इतिहास, प्रतिसेयर आम्दानी, ब्राेकरहरूकाे सल्लाह लिएर लगानी गर्छन् । उनले २०६३ सालतिर उनले बैंक अफ काठमाडाैंकाे सेयर ब्लुचिप ठानेर झण्डै २५०० रूपैयाँ हालेर किनेका थिए ।
त्यस कम्पनीकाे सेयर घट्दै जाँदा धेरै समय हाेल्ड गर्नु पर्ने अबस्था अएकाे उनकाे अनुभव छ । उनी प्राथमिक सेयर निस्कासन भएका बेला परिवारका सबै सदस्यका नामबाट आवेदन गर्छन् नै । त्यसबाहेक उनी दाेस्राे बजारमा दीर्घकालीन देखि अल्पकालिन लगानी गर्छन् । समग्रमा आफू सेयर बजारमा लागेर नाफामै रहेकाे उनकाे अनकाे भनाइ छ ।
बजारमा प्रवेश गर्नेहरू लाई उनी कम्पनीकाे आधारभूत विष्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न सल्लाह दिन्छन् । कम्पनीकाे लाभांशकाे इतिहास, प्रतिसेयर आम्दानी, पिइ रेसियाे, पिबि रेसियाे, बुक भ्यालुलगायतका तथ्यांक हेरेर दगानी गर्नु पर्ने उनकाे सल्लाह छ । पाैडेल लगानीकर्ताका सेलिब्रेटी पनि हुन् ।
उनी हरेक कम्पनीकाे साधारणसभामा बक्ताका रूपमा उपस्थित हुन्छन् । कम्पनीका अनियमितता, कम्पनीकाे सुसासनबारे उनी सशक्त आवज उठाउँछन् ।
उनले साधारणसभामा राखेकाे कुराले संस्था लाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकेकाे उनी बताउँछन् । अर्थसंसार डटकमका लागि प्रधानसम्पाक लीलानाथ घिमिरेले सेयर लगानीकर्ता शिवप्रसाद पाैैडेलसँग गरेकाे भिडियाे कुराकानीः
बजारकाे बुलिस ट्रेन्ड सुरू भयाे, नेप्से ६००० अंक पुग्न सक्छः विश्लेषक बिष्णु बस्यालसँगकाे कुराकानी